Shuruudaha & Xaaladaha Of Monday Match - 50% dhigma ilaa £ 100 |
Shuruudaha & Xaaladaha Of Monday Match - 50% dhigma ilaa £ 100
horumarinta Tani waxay noqon doontaa firfircoon on 9th, 16th, 23rd iyo 30-kii January 2017 (GMT).GMT waxa uu u dhigmaa ee -9.30hrs ACST, -1hr THIS, PTZ + 8noqon hrsTo xaq u leedahay gunada ah, ciyaaryahano waa shubto ugu yaraan £ 10.
bonus A of 50% aad deposit hore ee maalintii ilaa in ugu badnaan £ 100 waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada.
shuruudaha wagering Standard ee 30x lacagta bonus codsan hor bonus ama wax u dhigma guuleystayna lagu lacagaha withdrawn.Bonus dhiirrigelinta this kasbadeen karaa, kaliya loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro on kulan booska our.
Inta ay diinta ka badnaan ka lacag gunno la saftay doonaa 4X lacagta gunada abaalmarinta.
lacag Bonus si toos ah loogu badalo mar wagering waa dhameystiran.
wagers Kaliya dhigay on kulan Money Real kordhinayaa shuruud wagering ah.
Wagers dhigay on Play Waayo kulan Free ma tirin doonaa shuruudda wagering ah.
Ciyaartoyda waxaa la xusuusiyey in mid ka mid bonus oo kaliya uu noqon karaa mid firfircoon ee wakhti kasta, fadlan tag “my account” qaybta si aad u aragto oo dhan safka bonus.
Shuruudaha Oo Xaaladda – 50% ilaa £ 500 Daily ciyaarta